प्रचण्डले आफ्नै घरबेटीमाथि लिए एक्सन, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
प्रचण्डले आफ्नै घरबेटीमाथि लिए एक्सन, के हुन्छ अब ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै घरबेटीमाथि एक्सन लिएका छन्। प्रचण्डका घरभेटी शारदा अधिकारीले ठेक्का लिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नगरकोटको सडक नबनाएपछि प्रचण्डले छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न दवाव दिएका हुन।
वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेलले प्रचण्डलाई भेटी बाटो निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।भेटपछि वर्षौंदेखि अलपत्र परेको भक्तपुर नगरकोट सडक आगामी ४५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेबारे छलफल पछि निश्कर्षमा पुगेको मन्त्री भँडेलले जानकारी दिए।
उक्त सडक अझै निर्माण सम्पन्न नभई अलपत्र परेपछि हालै मन्त्री बनेका भक्तपुर चाँगुनारायण निवासी मन्त्री भँडेलले अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरी सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री भँडेलले अध्यक्ष दाहालसँग नगरकोट सडकखण्ड नबन्दा लामो समयदेखि पर्यटन तथा स्थानीय जनताले ठूलो दुःख पाउनुपरेको बताएपछि अध्यक्ष दाहाल सडक समयमै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।
दाहाल निवासबाटै मन्त्री भँडेलले निर्माण व्यवसायी अधिकारीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको र अधिकारीले आगामी ४५ दिनभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ थियो। घरबेटीका कारण प्रचण्ड बेलाबलामा चर्चामा आइरहन्छन्।
काठमाडौँ बस्नका लागि प्रचण्डको आफ्नै घर छैन्। उनी निर्माण व्यवसायी अधिकारीको खुमल्टार स्थीत घरमा बसिरहेका छन्। लाजिमबाट बसाई असुरक्षीत भएपछि प्रचण्ड कही बर्षअघि खुमल्टार सरेका थिए।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार ढलेको छ। सत्ता साँझेदार कांगेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी पछि कर्णाली प्रबेश सरकार ढलेको हो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने उद्घोष गरेपछि सरकार ढलेको हो। यद्यपी उनले राजीनामा दिन बाँकी छन्। प्रतिक्षारत मुख्यमन्त्री जीवन शाहीलाई फोन गरेरै मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।
‘एकदमै अन्योलपूर्ण समयमा मध्यान्हलगत्तै मुख्यमन्त्रीज्यूको फोन आयो। पुरानै अडान। घुर्की। राजीनामा नदिने कुरा त होला भन्ने लागेको थियो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीलाई उदृत गर्दै उनको निजी सचिवालयले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीज्युले फोन गरेर म राजीनामा दिन्छु।
तपाई मुख्यमन्त्री बन्नुस । सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाऔँ भन्नुभयो। जुन शब्द जीवन शाहीले एकमहिनादेखि सुन्न प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । सोही कारण उनलाई कर्णालीका प्रतिक्षारत मुख्यमन्त्री भनिएको थियो। जुन कुरा सोमबार आएर पूरा भयो।
यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जतिबेला माओवादीले सत्ता नछाड्ने अडान कसेको थियो। अनि कांग्रेसले बेलूकी नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा अन्योलता जताततै थियो। न महेन्द्र शाहीको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित थियो। न त जीवन शाही मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितता थियो।
गएको बैशाख ३ गते नै मुख्यमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्थालाई ६ महिना आड भरोसा दिएर सरकार बचाईदिएको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उत्तम हुने ठानेर महेन्द्र शाहीले आफै एक कदम अगाडि बढेर राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।
यसबीचमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मध्यस्तता नगरेका होइनन्। तर प्रचण्डलाई देखाएर माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्ति बस्नेतले कर्णाली प्रदेशको सरकार छाड्न मानिरहेका थिएनन। मुख्यमन्त्री शाही आफैँ नैतिकताका हिसाबले पनि राजीनाको पक्षमा थिए ।
त्यसपछि नैतिकता मात्रै होइन, पार्टीप्रतिको औचित्य र आवश्यकतालाई चुनौति दिएर एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता महेन्द्र शाहीमा आइलाग्यो । त्यसलगत्तै उनले सरकार सुरक्षित नरहेको र जतिबेला पनि माओवादी सरकार ढल्न सक्ने भएकाले कर्णाली–काठमाडौँ गठबन्धन जोगाइराख्न सत्ता हस्तान्तरणमा इमान्दारिता देखाए ।
‘हामीले स्पष्टसँग मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय उहाँलाई सुनाइसकेका थियौँ,’ कर्णालीका एक कांग्रेस नेताले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँको सरकार अल्पमतमा परिहाल्थ्यो। फेरि अल्पमतको सरकारमा बस्नु, फेरि विश्वासको मत लिनु,
फेरि संकट झेल्नु र धोका दिएको आरोप खेपिरहनुभन्दा राजीनामा दिएर चुनावका लागि पनि गठबन्धन बचाऔँ भन्ने धारणा उहाँमा आयो होला । ढिलै भएपनि सहमति मानेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यही खुशीको कुरा हो।
जसकारण मुख्यमन्त्री शाही आफैले जीवन शाहीलाई फोन नै गरेर सहजै रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन्। त्यसपछि जीवन शाही आफू नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क भए भने समयमै सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनेपछि नेता कार्यकर्तामा पनि बधाई र शुभकामना साटासाट गर्ने लहर चल्यो।